RUWAAYADII DEEQO DOOKH MA LEEDAHAY? Q-3AAD W/Q: Muxyaddiin Xuseen Ciid | Laashin iyo Hal-abuur
RUWAAYADII DEEQO DOOKH MA LEEDAHAY? Q-3AAD W/Q: Muxyaddiin Xuseen Ciid
RUWAAYADII DEEQO DOOKH MA LEEDAHAY? Q-3AAD
Xaaji Daaddihiye asagoo ordaya ayuu gurigiisii ku laabtay, asagoo ka xanaaqsan warka uu Faras ka soo maqlay, waxa uuna ku dhexdhacay reerkiisii.
Xaaji Daaddihiye: Meedey Deeqa, meeday Deeqa?
Horta maxaad guriga
Ama buuraaya gafuur
Gumaca noogu wadataa?
Gabadhyahay i dhegayso
Guubaabada ka soo yeedhay
Gabay aan ka iraahdo
Haddii uu garaadkeedu
Uu ka guuxi wanaag
Ama talo guul lagu gaariyo
Ayba hayso garowshiiyo
Iyo golaheeda holcaaya
Gayeysiin lahayd samaanta
Halka ay gabaahiirta
Iyo gubanta ka olaleyso.
Anigaa u garaad ah
Guudka saartay xilkiis
Gambada iyo gasiinkaaga
Gogosha taala gurigaaga
Waa waxaan u guclayn
Gabal dhaciyo waaberi
Ee garawsho u yeelo
Garwaaqsoo isku laabo
Anna hayba guulguulin.
Gacaloow i dhegayso, duqdaas soddohdaa ah af iyo ilaaq kuma lihid ee midda aad la digdig leedahay amase diiddan tahay in la isweydiiyo, waa danaha gurigeenna, wax danbe oo la da’daa ama dulqaad leh oo haray ma jiree.
Anigu dayac baan u jeedaa
Darxumaan u jeedaa
Dulmi baan u jeedaa
Duli baan u jeedaa
Dakharaan u jeedaa
Dufan baan u jeedaa
Dulin baan u jeedaa
Daacuun baan u jeedaa
Duufaan baan u jeedaa
Dabaylo baan u jeedaa
Dambas baan u jeedaa
Dabato baan u jeedaa
Dawlisyo baan u jeedaa
Daneyste baan u jeedaa
Intaas oo dirindiiriyo
Dooxataan u jeedaa
Haddaan rabbi daleelliyo
Dow kalena ii furin
Anoo dumay baan u jeedaa.
Waxaa la yiri: “Libaax nin aan aqoonbaa xoolo ka rita” Digdigtaada iyo waxsheeggaaga doqontaa ku carari lahayd, anse intaan xaq leeyahay waan soo taagnaanayaa, gabadh yar baa tahay balo yaysan dabada kaa galin, gurigaaga haddaadd ka baxdo meel walba waraabe miciyo dheer baa kuu fadhiya. Marka bal inta aan baahiyaha jira aan daboolayo iga war sug oo yaan balo ku qaadan, safar baanan u baxayaaye, sidaas ayaa noo balan ah.
Ee waxba aniga ha ii dardaar warine, xakabada wallaadan ka dageyn adoon saddexdaydii dalqadood I maqashiin. Dahabo waxa ay isku horgudubtay odeygeedii Xaaji Daadihiye, asna intuu dib u baxay ayuu heestaan hoose ku dhuftay:
Tan iyo yoonkaad dhalatayaan
Kuu yururay meel
Yeeli maayo maantana
In layga kaa yureeyee
Ruux yaqaan jacaylbaa
lagala yeeshaa rafiiq
Cishqi aan yaraynbaa
Iiga yimid dhankaagee
Haygu yeerin yaxaaskiyo
bahalada yamleyda ah
Yur ku dheh waraabihiyo
Xaaji Daaddihiye asagoo leh: “Yur ku dheh waraabihiyo, Yaanyuurtaan orddeysa” ayuu gadaal gadaal aqalka ugu baxay.
La soco qaybaha xiga haddii Eebbe idmo.
W/Q: Muxyaddiin Xuseen Ciid